Ahoana ny fiasan'ny teleskaopy: ampahany sy lafiny tokony hodinihina | Meteorolojia tambajotra
Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro
ny fomba fiasan'ny teleskaopy
Portillo Alemanina | 27/04/2022 10:00 | astronomia
Ny teleskaopy dia noforonina nanova ny fahalalana momba ny astronomia nandritra ny tantara. Amin'ny fampiasana ny fananan'ny lantihy sy ny fitaratra, dia izy no tompon'andraikitra amin'ny fanodinana ny hazavana avoakan'ny zavatra mba hahafahan'ny mason'ny olombelona mihalehibe sy maka sary. Amin'izao fotoana izao dia misy karazana endrika azo isafidianana sy kojakoja ambongadiny. Noho izany, alohan'ny hivoahan'ny teleskaopy voalohany, dia tsara ny mahafantatra ny fomba fiasan'ny teleskaopy, ny singa ao aminy ary ny fetrany. Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny misoroka ny fahadisoam-panantenana amin'ny fividianana ratsy. Betsaka ny olona tsy mahalala ny fomba fiasan'ny teleskaopy.
Noho izany antony izany dia hanazava tsikelikely ny fomba fiasan'ny teleskaopy sy ny zavatra tsy maintsy raisinao hianarana ny fampiasana azy.
1 inona no teleskaopy
2 ny fomba fiasan'ny teleskaopy
3 karazana teleskaopy
4 ampahany amin'ny teleskaopy
inona no teleskaopy
Indraindray ny olona dia manana hevitra mialoha momba izay azon'ny teleskaopy aseho azy ireo. Matetika izy ireo no manantena hahita antsipiriany bebe kokoa noho izay azon'ny teleskaopy aseho amin'ny alàlan'ny optika. Raha izany dia, ny teleskaopy tsara dia azo lazaina ho diso teleskaopy. Ohatra, ny planeta dia tsy hita maso lehibe sy tsara tarehy. Mahagaga antsika indraindray ny sary nalain'ny habakabaka rehefa mitsidika planeta samihafa.
Ny teny hoe teleskaopy dia avy amin’ny fototeny grika : midika hoe “lavitra” sy “mahita”. Izy io dia fitaovana optika izay nanjary fitaovana fototra amin'ny siansa astronomika, mamela fandrosoana maro sy fahatakarana tsara kokoa an'izao rehetra izao.
Ny fitaovana dia manampy amin'ny fijerena zavatra tena lavitra amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Ny teleskaopy dia maka taratra hazavana, mampifanakaiky kokoa ny sarin'ny zavatra lavitra. Serivisy ho an'ny:
Ny astronomia dia maka sary amin'ny zavatra kintana.
Ampiasaina hijerena zavatra lavitra amin'ireto sehatra manaraka ireto: fitetezana, fikarohana, fikarohana biby (vorona), ary tafika mitam-piadiana.
Ho fitaovana enti-mampianatra ny ankizy hiantomboka amin’ny siansa.
Mba hahatakarana tsara ny fomba fiasan'ny teleskaopy dia misy zavatra 2 tokony hotadidina:
Ny fihetsiky ny mason'olombelona: tsy maintsy takatsika izany mba hanatsarana ny fahaizany.
karazana teleskaopy - afaka mahafantatra ny fomba fiasan'izy ireo. Hojerentsika ny mahazatra indrindra, izany hoe ny teleskaopy taratry sy ny teleskaopy refracting.
fitondran-tenan’ny mason’olombelona – Ny maso dia voaforon'ny pupil (izay miasa toy ny family) sy ny temimaso (izay maneho hazavana). Raha mijery zavatra lavitra dia zara raha misy ny hazavana avoakany. Ny family natoralin'ny masontsika (pupil) dia mampiseho sary tena kely eo amin'ny temimaso. Raha akaiky ny zavatra iray dia mamoaka hazavana bebe kokoa ary mitombo ny habeny.
Raha ny teleskaopy dia mampiasa lens sy fitaratra izy mba hanangonana hazavana betsaka araka izay azo atao avy amin'ny zavatra iray, hampifantoka io taratra io, ary hitarika azy amin'ny maso. Izany dia mahatonga ny zavatra lavitra ho tsara kokoa sy lehibe kokoa.
Na dia misy karazany maromaro aza (misy karazana nomerika aza), ny mahazatra sy mahomby indrindra dia:
Fandinihana teleskaopy: Tsy teleskaopy lehibe izy io, tsy ny lens ihany no azonao ampiasaina fa ny fitaratra ihany koa. Amin'ny lafiny iray dia hanana ny teboka ifantohany (ilay family fampidirana ho an'ny hazavan'ny kintana) isika, ary avy eo dia hanana fitaratra voaporitra be eo amin'ny farany ambany (andry mifanohitra) izay hitaratra ny sary. Toy ny hoe tsy ampy izany, ny antsasany dia hanana fitaratra kely iray hafa isika mba "hamondrika" ny sary, izay ho dingana farany alohan'ny hamindrana ny maso, izay hampiasaintsika hijerena ny sisin'ny teleskaopy.
Teleskaopy refractor: Teleskaopy lava be ireny. Amin'ny lafiny iray dia hanana ny teboka ifantohany isika (ilay family lehibe afaka mifantoka amin'ny hazavana betsaka araka izay azo atao; manana halavan'ny fifantohana izy), ary amin'ny farany iray dia ny eyepiece (ilay family kely hijerena azy; halavan'ny focal lava). Ny hazavana avy amin'ny kintana (ilay zavatra hojerena) dia miditra amin'ny alàlan'ny teboka ifantohany, mandeha amin'ny halavan'ny focal lava voaforona amin'ny habeny lehibe, ary avy eo dia manomboka haingana ny lalana fohy amin'ny alàlan'ny halavan'ny maso, izay mampitombo be ny sary. Arakaraka ny halavan'ny teleskaopy refracter no mihamaro kokoa ny sary.
ampahany amin'ny teleskaopy
Raha te hahafantatra marina ny fomba fiasan'ny teleskaopy isika dia mila mahafantatra ny ampahany aminy. Tsy ny teleskaopy rehetra ihany no mampiasa lantihy. Misy karazana teleskaopy afaka mampiasa fitaratra. Na inona na inona teleskaopy ampiasaina, ny tena asany dia ny mampifantoka ny hazavana araka izay tratra ary manome sary maranitra amin'ny zavatra lavitra.
Ny tanjona dia mety ho lens (na fitaratra) misy aperture manokana na savaivony izay, rehefa voaray ny hazavana, dia mampifantoka azy amin'ny faran'ny fantsona optika. Ny fantsona optika dia azo atao amin'ny fiberglass, baoritra, metaly, na fitaovana hafa.
Ny teboka ifantohan'ny hazavana dia antsoina hoe focal point, ary ny halaviran'ny family mankany amin'ny teboka dia antsoina hoe focal length. Ny tahan'ny focal na radius dia ny tahan'ny elanelana misy eo amin'ny aperture sy ny halavan'ny focal, maneho ny famirapiratry ny rafitra izy io ary mitovy amin'ny isan'ny fijanonana f napetraka eo amin'ny halavan'ny focal (fôcal ratio = focal length / aperture).
Ny tahan'ny fifantohana kely (f/4) dia manome sary mazava kokoa noho ny tahan'ny fifantohana lehibe (f/10). Raha mila sary, tsara kokoa ny rafitra misy salan'isa focal kely satria ho fohy kokoa ny fotoana fampitana.
Arakaraky ny haben'ny aperture (savaivony) amin'ny teleskaopy no hangonina bebe kokoa ny hazavana ary hamiratra kokoa ny sary aterak'izany. Zava-dehibe izany satria saika manjavozavo avokoa ny zavatra eny amin’ny lanitra ary manjavozavo be ny hazavany. Ny fampitomboana avo roa heny ny savaivony amin'ny teleskaopy dia mampitombo avo efatra heny ny faritra mahazo hazavana, izay midika fa ny teleskaopy 12-inch dia mahazo hazavana in-4 heny noho ny teleskaopy 6-inch.
Rehefa mampitombo ny aperture isika dia hahita kintana mirefarefa kokoa. Ny habe dia ny famirapiratan'ny zavatra selestialy. Ny sanda manakaiky ny 0 dia mamirapiratra. Ny magnitude ratsy dia tena mamirapiratra. Ny maso dia afaka mahita midina hatramin'ny halehiben'ny 6, izay mifanitsy amin'ny kintana manjavozavo eo amin'ny sisin'ny fahitana.
Ny teleskaopy lehibe kokoa dia tsy mamela anao hahita zavatra maizina fotsiny. Ankoatra izany, mampitombo ny habetsaky ny antsipiriany, izany hoe mampitombo ny fanapahan-kevitra. Ny astronoma dia mandrefy ny famaha amin'ny segondra amin'ny arc. Ny fanapahan-kevitry ny teleskaopy dia azo tsapaina amin'ny fijerena ny fisarahana eo amin'ny kintana roa, izay fantatra amin'ny fisarahana hita maso na zoro.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ny teleskaopy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » astronomia » ny fomba fiasan'ny teleskaopy
inona ny lava
Raiso amin'ny mailakao ny vaovao rehetra momba ny toetrandro.
Fananganana sy fandalinana